Tokyo no mpandresy indrindra amin'ny sary Yuichi Yokota | Famoronana an-tserasera
Efa mijaly amin'ny hatsiaka sy ireo lanezy amin'ny lanezy Amin'ireto faritra ireto, tonga ny sarin'i Yuichi Yokota hampifaly anay amin'ny ririnina Tokyo izay itondran'ny tsirairay antsika an-tsambo any amin'io ririnina io izay tsy maintsy ho be fitiavana amin'ny tany lavitra be.
Yuichi Yokota dia mpaka sary izay matetika mandeha matetika, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nijanona tao an-trano izy mba hanazava antsika amin'ilay filatsahan'ny lanezy izay mamorona tontolo an-tanàn-dehibe toa nofy. Sary sasantsasany izay hahatonga anao haniry handeha amin'ity tanàna ity amin'ny Krismasy.
Fotoana fohy taorian'ireo daty manokana natokana ho an'ny maro an'isa ireo dia navelan'i Yuichi Yokota ho antsika ity andiana sary ity sambory ny renivohitra Japoney; toy ireo hafa ireo mitety ny fiainana amin'ny alina any Tokyo.
Ary io no tena atrehantsika karatra paositry ny Noely tsara tarehy avy any Tokyo izay ahitanao tsara ny fifamoivoizana isan'andro ataon'ny olom-pirenena rehetra amin'ny iray amin'ireo renivohitra tandindona indrindra eto an-tany.
Ary ny sary tsirairay ve no miteny ho azy ireo asehoy ny arabe feno lanezy, olona mitafy akanjo ririnina sy jiro izay mampiavaka ny tsirairay amin'ireo magazay ireo ny tolakandro.
Sary izay ny felam-panala koa no maherifo ary toa toy ny effets sary namboarina niaraka tamin'ny Adobe Photoshop na programa hafa toa ny Affinity Photo; Etsy andaniny, eto ianao dia manana ny hitsin-dàlana amin'ny keyboard ho an'ny programa Affinity rehetra.
Tsy misy tsy ampy koa sary antoandro, na dia very aza ny majika kely mifandraika amin'ireo arabe mistika an'ny tanàna toa an'i Japon. Ary tsy ho izao no fotoana farany manaraka ireto andalana ireto ny sary sasany solontena tsara ny fiainana andavanandron'ny olom-pireneny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Tokyo mahagaga sy masiaka miaraka amin'ny sarin'i Yuichi Yokota
Te hitahiry ny tranonkala amin'ny alàlan'ny 'Magna Carta' ny rain'ny Internet